'हत्यामा संलग्न दोषीलाई सरकारी संरक्षण', समिति सवै बेकाम | Citizen Post News
काठमाडौं । सुदुर–पश्चिम प्रशंसा संरक्षण समुहले निर्मला पन्तको बलत्कार र हत्यामा संलग्न दोषी पत्ता लगाई कारवाहीको लागि सरकारसमक्ष जोडदार माग गरेको छ । उक्त समूहले बृहत्त अन्तरक्रिया आयोजना गरेर निर्मलाको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको र जघन्य अपराधको सम्बन्धमा पीडीत परिवारको सम्वेदनशीलताकोसमेत बेवास्ता गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । साथै हत्यामा संलग्न दोषीलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाहीको माग गरेको हो ।
७५ दिनसम्म पनि दोषी पत्ता लाग्न नसकेको र पीडित पक्षले न्याय पाउन नसकेकोे भन्दै सुदूर–पश्चिमका काठमाडौंबासीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने सामाजिक संस्थाहरु र नागरिक समाजहरुले संयुक्त रुपमा आज गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो घट्नाको छानबिन गर्दे दोषीलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे । नागरिकको स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको हनन् भएको भन्दै उनले भने,‘घट्नाको प्रकृतिमाथि केही बिसंगतिहरु देखिएका छन्, त्यो सत्यपनि हो तर प्रमाण मेटाउने कामपनि भएको हुँदा अपराधीले संरक्षण पाईरहेको छ ।’
निर्दोष मानिसहरुलाई अनाहकमा अपराधीको ट्याग लागेको बताउँदै उनले यो सामाजिक न्यायको मुद्दा भएको कारण यसमा कसैले राजनीती गर्न नहुने बताए । सरकारसंग न्याय माग्दा राजनीति हुन्छ भने कोसंग न्याय माग्ने भन्दै लेखकले प्रतिप्रश्न गरेका छन् । उनले घाईतेहरुको स्थिति अत्यन्त जटिल रहेको बताउँदै त्यतातर्फ समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने,‘राज्यको कति सम्पति नोक्सान हुने खतरामा थियो र गोली चलाएर नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्यो, जिन्दगीभरिको पीडा बोकेर बाँच्नुपर्ने ?’ उनले काङग्रेसलाईमात्र न्याय चाहिएको नभएर सबैले निर्मलाको लागि न्यायको माग गरिरहेको बताए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नेकपाका सांसद डा.दिपकप्रकाश भट्टले यो घट्नाका बारेमा आफूहरुले संसददेखि सडकसम्म नै जानकारी गराईसकेको जनाए । पाँच महिना यता १७० बलत्कारका घट्ना घटिसकेको जनाउनदै उनले अपराधी जतिनै शक्तिशाली भएपनि राज्यले सार्वजनिक गर्नुपर्ने धारणा राखे । डिएनए टेस्टको रिपोर्ट नेगेटिभ आईसकेपछि वास्तविक अपराधि को हो ? भनेर सत्य तथ्य पत्ता लगाउनु राज्यको दायित्व भएको पनि उनले बताए । आजको भोलिनै पत्ता नलागे पनि अपराधि कानुनको कठघरामा आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
घट्ना घटेको यतिका दिन बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म दोषी पत्ता लगाउन नसक्नु यो राज्यको लागि लाजमर्दाे बिषय भएको उनको भनाई थियो । उनले भने,‘अब राज्य यसमा चुक्न हुँदैन् ।’ कार्यक्रममा नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले पञ्चायतको बेलाकोजस्तै लाश भेटिने तर अपराधि भेटिने आशा नरहेको बताए । उनले कनञ्चनपुरको घट्नापछि पाँच महिनामा अन्य यस्ता धेरै घट्नाहरु घटिसकेको जानकारी गराए । दुई तिहाईको बहुमतको सरकारमा दुई तिहाईकै दरले अपराधको घट्ना बढेको उनले आरोप लगाए ।
त्यस्तै अनेरास्ववियुका महासचिव ऐन महरले निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्यामा संलग्न अपराधिलाई हदैैसम्मको कारवाहीको माग गरे । घट्नाको निश्पक्ष छानविन गराई अपराधमाथि राजनीति गर्न नहुने उनले बताए । अहिले आएर आफ्ना आफन्तबाटै अपराध बढिरहेका कारण पनि नेपाल प्रहरीले सम्पुर्ण सयन्त्रको प्रयोग गरि छानबिन गर्नुपर्ने बताए । महिला अधिकारकर्मी शारदा चन्दले निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्याको घट्नामा अनुुुसन्धानको लागि पक्ष र विपक्ष दुबैको उत्तिकै महत्वपूर्ण भुमिका रहेको बताईन् ।
उनले आफु प्रधानमन्त्री कार्यालयमा घट्नाको बारेमा जानकारी गराउन जाँदा अपमानित भएको गुनासो पोखिन् । चन्दले भनिन्,‘प्रहरीको आदेशबिनै कसरी परिचालन भयो ? क–कसको घट्नामा दोष रहेको छ सबै सार्वजनिक गरियोस् । सर्कसकोजस्तै हामीलाई न ननचाईयोस ।’ अहिलेसम्म पाँच वटा छानबिन समिति बनिसक्दा पनि वास्तविक अपराधि पत्ता नलागेकोमा उनले आक्रोश समेत पोखिन् । उक्त कार्यक्रममा अनेरास्ववियू (कान्तिकारी) का केन्दिय सचिव डिबि साउद, नेता हर्केश कठायतलगायतका विद्यार्थी नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।